Mabasa - EVERGREEN KUPAKIRA NOKUDZIDZA CO., LTD
Isu tinogara tichitsvaga tarenda nyowani yekukura mhuri yedu ku EPP Kana iwe uchifarira kunyorera ku EPP, ndapota isa ruzivo rwako pazasi.
At EPP, tinoedza kuva mutungamiri pakati tefa kupakata makambani mu China uye pasi rose. Isu tinogara tichikurudzira vashandi vedu kupokana nechimiro chiripo. Nesu, iwe wakapihwa simba rekuti usango funga nezve mabudiro epfungwa mune akapfava kurongedza, asiwo kuvaunza kuhupenyu nerubatsiro rwechikwata chevanokwanisa uye vane ruzivo mahunyanzvi kubva kune anochinjika ekupakata indasitiri.
Kambani uye Tsika
KuEPP, kubatana pamwe nekuvandudzwa kunoramba kuri hwaro hwekuzvipira kwedu kugutsikano yevatengi. Isu tinodada kuva netsika yekushandira pamwe, kujeka uye hutungamiriri nemuenzaniso, izvo zvakakonzera mamiriro epasi rese ekushandira evashandi vedu vane huwandu hwakakura hwekuita kwevashandi uye kugutsikana.
Isu tinotenda kuti vashandi vedu chinhu chedu chakakosha uye dombo repakona rekuwana yakakwira kugutsikana kwevatengi mazinga. EPP inokoshesa uye inokoshesa zvakasiyana uye yakazvipira kutsika isina rusarura. Ku EPP, iwe unowana mukana wekushanda pamwe neimwe yeakanakisa tarenda mune inochinjika yekuisa indasitiri.